Hargeysa Oo Lagu Soo Bandhigtay Fursaddo Maalgashi Oo Aan Amaah Lahayn
Tuesday February 13, 2018 - 00:35:41 in Wararka by Editor Caynaba News
Hargeysa, (CYN) – Kulan lagu daah-furayay fursaddo maalgashi oo loogu tala-galay in lagu taageero ganacsatadda bilowga ah iyo dadka hal-abuurka leh ee haya figraddo s
haqaynaya oo gacansi ayaa maanta lagu qabtay Hargeysa.
Guddoomiyaha Shirkadda Guul Gourp Guuleed Haaruun Ibraahim oo sharaxaad ka bixiyay ujeedada munaasibadan ayaa tilmaamay in ay doonayaan inay ummaddoodda ka qayb-geliyaan maalgalintan oo wax-tar u leh dhaqaalaha waddanka iyo shaqo abuurkaba. "Waxaanu ugu baaqaynaa qof kasta oo haya figrad ganacsi oo cusub oo u doonaya maalgelin ama gacasi kooban haysta inuu ka faa’iidaysto oo uu toos ulla xidhiidho Tony Elumelu Foundation oo doonaya in dadka Afrikaanka ahi cagahooda isku taagan. qofkii u baahda in aanu xidhiidka ka caawinnana xarunta Shirkadda Guul Group ha noogu yimaado.” Ayuu yidhi. Waxaana uu intaas ku daray in ugu yaraan loo baahan yahay 1000 ruux oo keena figraddo wanaagsan oo lagu siiyo maal-gelin iyo tababaro wixii ka dhiman, si taasi u suurta-gashana qof walba laga rabbo inuu u dirto shirkaddan hindisihiisa si loo taageero.
Axmed Muxumed Geelle oo isna ku xigeen ka ah Hay’adda ka hortagista aafooyinka dabiiciga ah iyo Kaydka Qaranka ayaa tilmaamay in fursadani faa’iido u tahay dadka abaaraha saddex jirka ahi hayaan. "Waa fursad ay ka faa’iidaysan karaan dadka xooluhu ka baxeen oo ay ku noqon karaan ganacsato” Ayuu yidhi guddoomiye ku xigeenka hay’adda NERAD
Waxaase xiiso gaar ah lahaa oo madashaas ku soo bandhigay horumarka ay ka gaadheen maal-gelintan laba dhallinyaro ah. "Anigu waxaan ka qayb galay 2016 oo aniga iyo nin kale aan Somaliland ka hellay. Waxaana la ii maal-geliyay Shirkad beeraha ah oo aan u bixiyay Haaddi. Lacagta waxaa dheeraa tababaradda la’I siiyay oo Ilaa hadda ii socda.” Sidaas waxaa yidhi Jaamac Ibraahim Yaasiin oo halkaas ka hadlay. Waxaana uu u soo jeediyay dadku inay codsiyadda dirsadaan oo ay hindisayaashoodda ka faa’iideeyaan.
Sidoo kale Cabdirisaaq Axmed oo isna fursaddan ka faa’iidaystay ayaa waxa hadalkiisa ka mid ahaa. "Waxaa igu jirtay muddo figrad. Dadkeenuna qofka dhallinyaradda ah lacag la iskagama dhiibayo. Waxaanan arkay Fursaddan waxaanu u gudbinay figraddii. Waxaanan sameeyay shirkad-yar oo Saabuunta dabiiciga ah ee Jidhka soo saarta (Nadiifo)”